rita makarau on News24
ARTICLES RELATING TO RITA MAKARAU
Zimbabwe’s electoral body has invited interested parties keen on observing the on-going biometric voter registration (BVR) exercise to register with the chief elections officer for accreditation, says a report.
Zimbabwe’s electoral body has revealed that the number of political parties registered to contest the 2018 elections has more than doubled, a report says.
Voting at some polling stations in Zimbabwe has been extended until midnight, as thousands still remain in queues to vote in this year’s presidential and parliamentary elections.
President Robert Mugabe's rivals say the chaotic organisation of early voting for soldiers and police showed Zimbabwe was not ready for a 31 July general election.
Zimbabwe's leaders have picked a Supreme Court judge to head the country's electoral body ahead of a crunch constitutional referendum and national elections, a minister says.
Among the top Africa stories is the latest developments in the Grace Mugabe underwear saga and reports of a Ugandan public servant who demanded to be buried with cash in his coffin, so that he could "bribe" God.
Zimbabwe's vote appears to have been "free and fair", says Rita Makarau, head of the country's election commission.
Officials in Zimbabwe say a general election this week will be credible, attempting to dispel concerns of possible vote rigging and other violations.
Zimbabwe's electoral commission says it was ready to organise elections planned for this year to replace a shaky power-sharing government, despite receiving only a fraction of the budget.
Rita Makarau, a Zimbabwean Supreme Court judge, will serve as the country’s new elections chief through upcoming elections, Justice Minister Patrick Chinamasa says.